Dumar badan oo la guursado ma barwaaqo ayaa ku jirto? - BBC News Somali
Dumar badan oo la guursado ma barwaaqo ayaa ku jirto?
Image caption Daraasadda ayaa muujineysa in dumar badan oo la guursado ay horseedo barwaaqo
"Caruurta ay dhalaan ragga dhowrka xaas leh waa ay ka wanaagsan yihin caruurta kale ama haddii aysan ka wanaagsaneyn na waxay lamid yihiin caruurta kale oo marnaba kama hooseeyaan". Sidaasi waxaa Thomson Reuters Foundation u sheegay David Lawson.
Image caption Qowmiyadda Masai da
" Dumar badan oo la guursado mararka qaar dhaqanka way ku fiican tahay , iyadoo la eegayo awooda dumarka aysan u laheyn inay maamulaan dhaqaalaha".